Yenza umbono olungileyo kwaye wenze entsha ukumisa amandla ngePowusta ye-LED
VERSATILITY EZIPHAKAMILEYO SONKE ISithuba
Isakhelo sePosta yedijithali eyiAvant-garde
Iposta ye-ECHINLED ye-LED yenziwe ngobuchwephesha bokunika iprofayili egudileyo, encinci. Yenziwe nge-anodized lightweight lightweight kodwa i-aluminium ehlala ihleli, ukwenza ukuba yonke iposta yesakhelo ibe nobunzima obungaphantsi kwe-35kg, iyenze ibe nokuphatheka ngakumbi kwaye kube lula ukuyifaka.
Lonwabele ilungelo lokubukela okanye ukrwaqula ividiyo yakho, iaudiyo okanye imifanekiso edlalwayo nanini na, naphi na nge-poster ye-LED. Hlaziya umxholo wakho wedijithali kwisidlali semithombo yeendaba esakhelweyo esinamandla ngeWiFi okanye nge-USB. Ukulandela ngokulula kwimenyu ekwiskrini kwenza ukuba kube lula kakhulu ukucwangcisa umxholo wakho kwaye akukho luqwalaselo lunzima olufunekayo nantoni na!
Uyakukuthanda ukufumaneka ngokukhawuleza kokulungiselela kunye nokutshintsha imodyuli yephaneli evela ngaphambili ngombane wemagnethi. Enkosi kubuchwephesha obunelungelo lobunikazi lokudibanisa iimodyuli Ukanti enye inzuzo, ekhethekileyo kwiposta yakho ye-LED.
Imodyuli yeSmart yexesha elizayo efakwe ngobuchule kwinkqubo nganye ye-EACHINLED ye-poster yipowerhouse yayo. Injineli ejikeleze intsebenzo ephezulu ye-Intanethi iNkanyamba IV FGPA ekwaziyo ukuqhubekeka ngokufana, kunye nokudityaniswa okunzulu kwezixhobo zolawulo lweMCU kwenza imodyuli yokubonisa ukuba iqulethwe kukunxibelelana nolawulo. Ngokudibeneyo benza isiseko seModyuli eSmart kwaye bahambisa amaqonga anamandla okusombulula ividiyo, baqinisekisa ukuba yonke imisebenzi iyahlangana, ngaloo ndlela kuqinisekiswe unxibelelwano olungenamthungo njengokujonga esweni imisebenzi kunye nokufumana umsebenzi ngokuqhubekayo.
Isoftware ye-pre-integrated ye-poster ye-LED yenza ukuba ukwazi ukunxibelelana nayo ngePC okanye izixhobo ze-Android kwindawo enye nge-RJ45, i-WiFi, i-3G, i-USB kunye ne-HDMI. Dlala umxholo wakho ngokuthe ngqo kwisixhobo sakho nokuba lilaptop, ithebhulethi okanye ifowuni eyi-smart. Yenza ulawulo lwevidiyo esembindini kunye nolawulo nge-intanethi. Ukusebenza ngokukuko kuyanda ngenxa yokuba unokuphosa ifayile yakho ividiyo ukude ngaphandle kwesidingo sokuba nesixhobo esilawulayo esizeni okanye iPC.umphathi kwaye ujonge ividiyo yakho kwinduduzo yeofisi yakho.
⊙ >>>>>>> Jonga ingxelo epheleleyo yencwadi yemveliso yePDF